Beraketa Bekily Avotry ny zandary ireo vehivavy nalain’ny dahalo an-keriny
Vehivavy roa no nisy naka an-keriny na tratry ny "Bohiry" nataona dahalo miisa 5 mitam-basy tany Antsarety,
fokontany Ampandrandava, kaominina ambanivohitra Beraketa, distrikan’i Bekily, afak’omaly talata 11 febroary tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Niroso avy hatrany tamin’ny fanarahan-dia ireo dahalo ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritra poste fixe ao Ampandrandava taorian’izay notronin’ny fokonolona. Fantatra nandritra ny fanadihadiana nataon’izy ireo fa nihazo an’Andriry ireo jiolahy, niaraka tamin’izy mirahavavy. Tao amin’ny tanànan’Ambatobe Andriry no nifandona ny roa tonta taorian’izay ka avotra soa aman-tsara ireo saika natao takalon’aina. Dahalo 3 kosa no lavo avy hatrany raha mbola hifampitadiavana ilay naman’izy ireo roa ambiny. Raha araka ny loharanom-baovao azo dia mbola tovovavy ireto nokasain’ny dahalo nalaina an-keriny ireto. Salama tsara izy ireo ary efa tafaverina eo anivon’ny ankohonany.